Ahoana ny fampiasana amin'ny efitrano | Ota Ward Hall Aplico
<Fitandremana> Ho an'ireo efi-trano misy marika *, novaina ny fomba loteria mba hisorohana ny aretina coronavirus vaovao.
※Efitra fampirantiana (ampiasaina amin'ny fivoriana)
※Efitra kely / efitrano fampirantiana (fampiasana fampiratiana)
Fomba loteria Daejeon Citizen's Plaza Mandraisa anjara amin'ny loteria amin'ny efitrano kely.
* Ny toerana hanaovana loteria dia ny Ota Citizen's Plaza.
Ota Ward Hall Aplico, tsy toerana misarakaMariho tsara fa ho tanteraka izany.
* Tsy azo ampiharina amin'ny Internet Uguisu Warbler net
(Loteria amin'ny alàlan'ny solosaina)
Fomba fampiharana fotoana Ny fandraisana dia ekena ao amin'ny Ota Ward Plaza Small Hall manomboka amin'ny 1:20 hariva ka hatramin'ny 2:XNUMX hariva amin'ny andro anaovana ny loteria.
(Manomboka amin'ny 2:XNUMX hariva ny loteria) Ny fandraisana dia ekena ao amin'ny Ota Ward Plaza Small Hall manomboka amin'ny 9:20 maraina ka hatramin'ny 10:XNUMX maraina amin'ny andro anaovana ny loteria.
(Manomboka amin'ny 10 maraina ny loteria) Manomboka amin'ny faha-4 ka hatramin'ny faran'ny volana, efa-bolana alohan'ny volana fampiasana, dia miangavy ao amin'ny Uguisu Net, Ota Ward Hall Aplico, na eo am-baravarank'i Ota Ward fihaonana.
Datin'ny loteria Andro iray herintaona alohan'ny volana fampiasana
(1 Janoary fotsiny) 6 andro 1 volana alohan'ny volana fampiasana
(1 Janoary fotsiny) 3 andro 1 volana alohan'ny volana fampiasana
(1 Janoary fotsiny)
Fotoana fanamafisana fandresena tsy misy Manomboka amin'ny andro aorian'ny andro loteria ka hatramin'ny faha-7 amin'io volana io ihany, zahao ny valin'ny loteria ao amin'ny Uguisu Net.
(Hofoanana ho azy aorian'ny fotoana)
Fampiasana fampiharana / fe-potoana farany fandoavana Manomboka amin'ny daty amin'ny loteria ka hatramin'ny faha-20-n'io volana io ihany
(Hofoanana ho azy aorian'ny fotoana) Manomboka amin'ny andro aorian'ny andro loteria ka hatramin'ny faha-15 amin'io volana io ihany
Toerana fandraisana / ora fandraisana Ota Ward Hall Aplico
9:7 am-XNUMX: XNUMX hariva
(Isan'andro afa-tsy amin'ny andro mihidy) · Ota Ward Hall Aplico
9:7 maraina ka hatramin'ny XNUMX:XNUMX hariva (isan'andro afa-tsy ny andro mihidy)
· Isan-toerana ao amin'ny paroasy: 9:7 ka hatramin'ny XNUMX:XNUMX hariva
Fotoana fampiharana Manomboka amin'ny andro aorian'ny datin'ny loteria ka hatramin'ny 14 andro alohan'ny daty fampiasana Manomboka amin'ny andro aorian'ny datin'ny loteria ka hatramin'ny 7 andro alohan'ny daty fampiasana Manomboka amin'ny faha-3 amin'ny volana 8 volana alohan'ny volana fampiasana ka hatramin'ny andro fampiasana
Fampiasana fampiharana / fe-potoana farany fandoavana Aloavy amin'ny fotoana fangatahana. 1. Raha nanao fangatahana tamin'ny Net Uguisu ianao dia andoavam-bola ao anatin'ny 14 andro aorian'ny andro fangatahana.
2. Raha nanao fangatahana teo amin'ny kaontera ianao dia andoavanao vola amin'ny fotoana anaovana fangatahana. * Raha mangataka manomboka amin'ny 2 andro alohan'ny daty hampiasana amin'ny andro fampiasana ianao dia ny Ota Ward Hall Aplico ihany no ho afaka.